Jang Dong-gun and Ko So-young lavish wedding - video.phpmyanmar.com
Jang Dong-gun And Ko So-young Lavish Wedding
Posted By - Ko Ko - May 3, 2010
What will Jang Dong-gun’s baby look like?
မင်းသား Jang Dong-gun(38) နဲ့ မင်းသမီး Ko So-young(38) တို့ဟာ မေလ ၂ ရက်နေ့ က Seoul မြို့ Shilla Hotel မှာ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ လက်ထပ် လိုက်ကြ ပါတယ်။
၄င်းအခမ်း အနား သို့ နာမည်ကြီး မင်းသား မင်းသမီး များနဲ့ မီဒီယာ လောကမှ နာမည်ကြီး အများ အပြား တက်ရောက် လာကြ ပါတယ်။
မင်းသား မင်းသမီး ဟာ သတင်းစာ သမား များနဲ့ ခေတ္တ တွေ့ဆုံ ပွဲကိုလည်း ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။ မင်းသား မင်းသမီး အတွဲကို ခေတ္တ ပဲဖြစ်ဖြစ် တွေရဖို့ ရာပေါင်း များစွာသော ပရီသတ် ကြီးဟာ (ဂျပန်မှ fans ၂၀၀ အပါ အဝင်) ဟော်တယ် ပြင်ပမှာ စောင့်ဆိုင်း နေကြ ပါတယ်။
သတိုးသမီး Ko So-young ဟာ လက်ထပ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန် ၃လ ရှိနေ ပြီးလို့လည်း သိရ ပါတယ်။ သားလေးလား သမီးလေးလား တော့ ကျွန်တော် တို့မသိ သေးပါဘူး၊ Ko So-young နဲ့တူတဲ့ သမီး ချောချောလေး တော့လိုချင် ပါတယ်လို့ မင်းသားက ပြောသွား ပါတယ်။
မင်္ဂလာ ဇနီး မောင်နှံဟာ မင်္ဂလာ ဦးညကို တစ်ရက် US$ ၈၀၀၀ (မြန်မာငွေ သိန်း ရှစ်ဆယ်) ပေးရတဲ့ suite ခန်းမှာ ကုန်လွန် ခဲ့ကြ ပါတယ်။ အခန်းတောင် ဒီလောက် ကုန်နေရင် ပွဲတစ် ခုလုံး အတွက် ဘယ်လောက် ကုန်မယ် ဆိုတာ ခန့်မှန်း သာကြည့် ကြပါ။
မင်းသမီး Ko So-young ဟာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုလုံး ကိုးရီးယား ကြော်ငြာ လောက ကို လွှမ်းမိုး ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး တစ်လက် ဖြစ်လို့ တော်တော် ချမ်းသာ ပါတယ်။ အလား တူပဲ မင်းသား Jang Dong-gun ဟာလည်း မင်းသမီး လောက် နီးပါး ချမ်းသာ ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဦး လက်ထပ် ပြီးရင်တော့ တော်တော် ချမ်းသာ မဲ့အတွဲ ဆိုပြီး ပြောဆို ခဲ့ကြ ပါတယ်။
A building owned by Ko So-young in
Cheongdam-dong in Seoul's
affluent Gangnam District
Computer simulation of their son or daughter to be
အထက် ဖေါ်ပြပါ ခလေး ပုံများ ကတော့ computer program နဲ့ အထူး ပြုပြီး ခန့်မှန်း ပုံဖေါ် ထားတဲ့မင်းသား မင်းသမီး တို့ရဲ့ ရင်သွေးငယ် ပုံများ ဖြစ် ပါတယ်။
မင်းသား နဲ့ မင်းသမီး ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ရိုက်ခဲ့တဲ့ Love Wind, Love Song အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ရိုက်စဉ် ကထဲက သီကျွမ်း မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခဲ့ ကြပြီး၊ ၂၀၀၇ ကထဲက date လုပ်လာ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒီလင်ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းသင်း ကြရ ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးအပ် ပါတယ်။
Summary - National heartthrob Jang Dong-gun(38) and actress Ko So-young(38) who is already three months pregnant, wed on Sunday 2nd May 2010. They wed at Shilla Hotel, Seoul inaprivate ceremony where about 500 family, relatives and friends were invited. Jang and Ko appeared before the press forashort photo session. Scores of reporters and fans, including over 200 from Japan, were seen lining up to getaglimpse of the stars at the hotel. Lee O-yong, former culture minister and renowned author, officiated at the marriage. Actor Park Joong-hoon emceed while ballad singer Shin Seung-hun sang to celebrate the occasion. Actress Lee Hye-young received Ko-s bouquet. The two will honeymoon in Bali, Indonesia and live inavilla in Heukseok-dong, Seoul. The two met on the set of the 1998 film [Love Wind, Love Song] and became friends. They made headlines last fall when they admitted that they had been dating since 2007.
End of Article - Jang Dong-gun and Ko So-young lavish wedding
swe nyein March 25, 2011 - 12:33 am
i bless that they always live happily together with their children
nyi ma lay March 12, 2011 - 2:50 am
I `m very glad for you all.
poe poe January 27, 2011 - 9:05 pm
သူတို့ မင်္ဂလာ ဆောင်တာ ၀မ်း သာပါ တယ် ။ နှစ် ပေါ င်း (၁၀၀) ကျော်တိုင် ပေါ င်း နိုင်ပါ စေ။
ကိုမင်း August 24, 2010 - 8:42 am
ဖြူက တော. လေသူများ ကိုမနာလို.ဖြစ် နေပြီး
ဖြူ August 13, 2010 - 8:08 am
ပိုက်ဆံရှိ တော့လဲလုပ်ကြ ပေါ့ ။
shwemyanmar May 25, 2010 - 2:09 am
so good. Nice post. http://www.hlayamin.com
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/487/jang-dong-gun-and-ko-so-young-lavish-wedding
Rendering time 0.0205 sec